Unyulo lwaseYurophu kunye nomnatha woKhuseleko lwe-FvD ('idlwengulo ngumzekelo wabafuduki): UMartin Vrijland
Ngamehlo akho akunakucingela, kodwa iVideo uT Thierry Baudet epostile kwi-Twitter namhlanje ekuseni, kum, intsalane ecocekileyo enezantsi ephindwe kabini. Ukuqala, ndicinga ukuba abantu abakwividiyo babecala ngabantu base-transgender kwaye siyaqaphela (njengoko kushiwo ngaphambili kwisayithi) amagama aphelela 'nge'; yintoni umgangatho omtsha ngabantu abaphula umthetho. Kufuneka sikholwe loo dlwengulo. Andiyi kukholwa. Ukongezelela, ngokumalunga 'nabafuduki abangamaSulumane' njengosongelo kuluntu lwaseNtshona.
Nantsi kwakhona siyabona ngokucacileyo umdlalo wokuchasana neentshaba. Kucacile ukuba iYurophu ikhukhulwa ngabantu abavela kwamanye amazwe, kodwa abantu abaxoshwa ngale ndlela ngeemfazwe abakwazi ukwenza nantoni na ngokwabo. Kukhona i-ajenda enkulu emva kwayo kunye noTyerry Baudet abayi kuluyeka.
Phew. Goosebumps. Kwaye kunjalo. Izwi #FVD ukuguqula ngokusisiseko umgaqo-nkqubo wokufuduka. 23 ngoMeyi. pic.twitter.com/sVM3SSvHSV
- Thierry Baudet (@thierrybaudet) 17 Meyi 2019
U-Thierry ubhekisela kwintsimi yamandla esiyibona ekhula kwiYurophu. Iyinkalo elawulwayo yokulawula into esiyibonayo kuwo onke amazwe angomakhelwane kunye neqela eliza kuthiwa liza kutshatyalaliswa ngenxa yokungaphumeleli kwe-Brexit kunye nazo zonke iingxabano zezoqoqosho eziza kubangela. Ziyi-Brexit, i-Nexit, i-Frexit (kwaye uyithiwa) abameli. Zenza isithintelo sokulwa ne-EU. Bayakwazi ukuyifumana. Zisetyenziselwa ukukhokela ukugxekwa komgaqo-nkqubo wemozulu kunye neminye imiba kwi-net net. Iipolon ezahlukeneyo zihlala zibonisa ukuba kukho imvakalelo enkulu ye-EU phakathi kwabantu. Ukulinganisa ukwazi kwaye ngoko ke le nethi yokukhusela isetyenziswe ngokuqinile. Ukuba ezi zilandelayo zikhula ngokukhawuleza ngokukhawuleza, kukho iibhobho eziphakathi ezisebenzayo. Sibone ukuba kungekudala indudumo kwi-FvD phezulu.
Cofa kwikhonkco eluhlaza okwesibhakabhaka ukuze ufunde ingcaciso yam ecacileyo yendlela inkcaso ephikisayo esebenza ngayo. Singazibona ngokucacileyo kwiTweet uTweet ukuba uyisigxina samandla esetyenziswe njengeqhinga lokukhusela umnatha. Ekugqibeleni, xa loo ntlanzi yeentlanzi iqhutywe emkhunjini, iibhobho kwicala eliphindwe kabini liya kuqaliswa kwaye iqela elikuloo mkhombe liya kuhlekwa kunye nokubethelwa kwipilisi. Ngale ndlela, abantu bajongana ngokucacileyo kunye neqela elibalulekileyo kunye neengcinga zeqhinga. UTyerry Baudet ngumqondiso osetyenziswa kunye nabo bonke abanye abapolitiki baseYurophu abanelungelo lokumakisha elo qela labantu. Xa i-bill bill ifika, akukho mntu uyalumkisa ukwenza isandi sokugxeka kwakhona, kuba ixhunywe kwi-brand yeBaudet (kunye nabangane bayo baseYurophu) kunye nelokugqwesileyo. I-Handy nehlakaniphile, kodwa leyo yinjongo yokuchaswa. Okwangoku, ezinye iintengiso ezingekho mthethweni kwaye zisetyenziselwa umgangatho omtsha wokutshintshwa nazo zingenzeka kwakhona.
tags: Baudet, EU, Yurophu, eziziimbalasane, FvD, abafuduki, YamaSilamsi, i propaganda, Thierry, khu seleko, ukhetho, dlwengulo
RA Uthotho. wabhala wathi:
20 Meyi 2019 kwi-17: 23
Ngaba ngokwenene kunabantu abambalwa abangaboniyo?
Eyona nto ingakholekiyo.
Ndiyathetha kakhulu nabantu abandikhoyo, abanemibono neengcamango, kodwa xa uqala ukubethelela iindaba, baya kugqabaza kum.
Yingakho ndikhetha ukuhlala ethafeni, kwaye wonke umntu apheke ade aphile.
« UDuncan akakwazi ukucula kunye ne-Eurovision Song Contest ihambe (i-LGBTI propaganda)
Ingxoxo yefoni kunye noWilson Boldewijn waseDe Telegraaf: uchungechunge malunga neengcamango zobuqhetseba »
Iindwendwe ezipheleleyo: 16.764.258